Kit Ukushaja igesi
Ezinye izingxenye ze-hydraulic breaker
I-Hammer ifake i-excavator imisebenzi ehlukahlukene isebenzisa
1, ubuchwepheshe bokusebenza be-excavator Okokuqala ukuqinisekisa isimo esizungeze i-. Ukusebenza kwe-Rotary, ezungeze izithiyo, isimo sendawo ukwazi amaphuzu, ukusebenza okuphephile; ukusebenza, ukuqinisekisa i-fore-and-aft direction track, ukugwema ukuncipha noma umthelela; zama ukunganikeli idrayivu yokugcina ebusweni be ...
I-Hydraulic breaker ne-rock hammer isebenza kahle
1. Amandla okuwohloka afanele Ukuchotshozwa okuphumelelayo, okwephula umfutholuketshezi kusebenzisa amandla afanele okwephuka. Uma amandla okuphuka enganele, khona-ke amandla esando se-piston ngeke abe ngubhuqu osebenzayo; Ngale ndlela, ibutho lamandla esiphikisi lizodluliselwa kwi-rock brea ...
ukulungiswa kwe-hydraulic breaker
Njalo emahoreni ayisishiyagalombili okusebenza noma kanye ngosuku, kudingeka ukuhlolwa okugoqekayo.Izinto zokuhlola zifaka: isimo sohlelo lwe-hydraulic • hlola b ...
abakhiqizi be-hydraulic breaker babelana ngokusetshenziswa kwesando se-hydraulic ngo-scraper esincane
Isando esincane sokususa nesokubacindezela sihlanganisiwe ukufeza inhloso yomshini wezinhloso eziningi. Umqondo oyinhloko ukusebenzisa uhlelo lwe-hydraulic lwe-scraper encane uqobo ukulungisa indawo yesando (kufaka phakathi ukulungiswa kokuphakama nokulungiswa kwe-Angle), futhi ngasikhathi sinye ukwandisa ...
Isaziso sokushaja i-nitrogen
Kungani ungeze i-nitrogen? I-nitrogen esandeni esicoboshayo Isebenzisa isando esichoboza umfutholuketshezi ukugcina amandla asele namandla abuyayo episton ngesikhathi sesiteleka sangaphambilini, futhi ikhipha amandla ngasikhathi sinye ngesikhathi sesiteleka sesibili ukukhulisa ikhono lesiteleka. Ngamafuphi, i ...
Ukusetshenziswa kwe-chisel breaker chisel
i-chiser breaker chisel ixhunywe imishini emincane kanye nemishini, ukusetshenziswa kwezimayini ubunjiniyela jikelele kusetjenziswa yensimbi engenalutho eyindilinga nensimbi engenalutho, ukusika kwensimbi okuyizigaxa okuyinsimbi ngaphakathi kwensimu ka-22 mm no-25 mm ububanzi, ububanzi obungaphandle bensimbi yensimbi engenalutho kanye no-38 mm kuya ku-32 mm ...
Sihlala sinamathela kumqondo webhizinisi wekhwalithi enhle, idumela eliphakeme, ukukhuthaza uphawu lukazwelonke.
Igumbi 1705, VIMBELA B, JINYE BUILDING, NO. 282 UMGWAQO WAKWAZHUHE ISIFUNDA SASESHANSHANI, IDolobha LaseHANDAN, EHEBEI